Volcanoes ee Spain: waxay yihiin, halka laga helo iyo astaamahooda | Saadaasha Hawada
Volcanoes ee Spain
Jarmal Portillo | 11/10/2021 09:34 | Geology
Spain waxaa ka jira foolkaano tiro badan, inkasta oo badidooda laga helo Jasiiradaha Canary. Waxa dad badani aysan ogeyn ayaa ah inay jiraan foolkaano ka jira Catalonia, Castilla la Mancha iyo Ciudad Real. Waxay leedahay astaamo gaar ah oo way seexanayaan hadda. Waxaa jira noocyo badan oo foolkaanno ah gudaha Spain waxaanan arki doonnaa astaamaha ay yihiin.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato volcano -yada kala duwan ee Spain iyo waxay yihiin astaamaha ugu waaweyn.
1 Volcanoes ee Spain
1.1 El Teide ee Tenerife
1.2 Teneguía ee La Palma
1.7 Enmedio, oo ah foolkaano biyaha hoostooda mara oo u dhexeeya Tenerife iyo Gran Canaria
1.8 Pico Viejo, Jasiiradda Tenerife
1.10 Alto de la Guajara, Jasiiradda Tenerife
El Teide ee Tenerife
Markay tahay 3.715 mitir oo ka sarraysa heerka badda, shaki la’aan waa meesha ugu sarraysa Spain iyo volcano saddexaad ee ugu sarreeya adduunka. Waxay ku taal Tenerife (Canary Islands), waxaa soo booqda 3 milyan oo qof sanad walba. Samayskiisu wuxuu bilaabmay 170.000 oo sano ka hor, qarxintii ugu dambaysayna waxay dhacday 1798 -kii.
Teneguía ee La Palma
Oktoobar 27, 1971, volcano Isbaanish ah ayaa qarxay waqtigii ugu dambeeyay wuxuuna ku soo noqday si deggan bishii Nofeembar 28. Dhowr maalmood oo dhaqdhaqaaq dhul -gariir aad muhiim u ahaa, qarxintii ugu dambeysay ayaa la duubay shalay. Teneguía waxay ku taal jasiiradda La Palma, wax ka yar 1.000 mitir oo ka sarraysa heerka badda. Dhir ma leh agagaarka.
Magaalada La Restinga (El Hierro), foolkaanno hoostooda ayaa qarxay bishii Oktoobar 2011 waxayna socotay ilaa Maarso 2012. Shan sano kadib, saynisyahannadu waxay dabagal ku sameeyeen folkaanaha sababtoo ah waxay ka baqayeen inuu dib ugu soo laabto nolosha isagoo leh awood badan.
Folkaanaha Cerro Gordo wuxuu ku yaalaa inta u dhaxaysa Granátula iyo Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real). Hadda waa matxaf waxayna u furan tahay dadweynaha tan iyo 2016. Inta lagu jiro booqashada, waxaad baran doontaa sida loo sameeyay waxaadna arki kartaa muuqaalka guud ee aagga. Dhererkeedu waa 831 mitir. Volcano -ka Campo Calatrava waa ficil foolkaanno oo saxan gudaha ah oo laxiriira buuraha Betic iyo barakicinta taarikada Eurasia iyo Afrika. Waxay ku bilaabatay qarxintii fulkaanaha Morrón de Villamayor de Calatrava 8,5 milyan oo sano ka hor. Qaraxii ugu dambeeyay wuxuu ka dhacay volcano Columba 5500 sano ka hor.
Waxay noqon kartaa inta u dhaxaysa siddeed ilaa hal milyan oo sano waxayna qayb ka tahay wixii markii hore loogu yeeri jiray "aagga dhexe ee fulkaanaha." Piedrabuena, oo la xiriira dillaacyada (La Chaparra, Colada de La Cruz iyo La Arzollosa) oo sababay dhacdooyin foolkaanno muhiim ah. Koorta Folkaanaha ayaa dhererkeedu yahay 100 m wuxuuna ka kooban yahay inta badan dhoobada la shubay. Godku wuxuu u furmayaa koonfur -galbeed, dhab ahaantii, marka la eego astaamaha jabka, waxa ugu weyn ee fulkaankani yahay qarxintii dhistay oo samaysay beerta socodka ugu muhiimsan ee Pajojo ee Jasiiradda Iberian.
Waxay ku taallaa xaafadda Las Manchas ee El Paso, Santa Cruz de Tenerife, La Palma. Wuxuu qarxay 24 -kii Juun, 1949 -kii, wuxuuna baabi’iyay beero iyo guryo ka dib markii lafaha soo dhaafay. Natiijada qaraxan ayaa ah Cueva de las Palomas, oo dhawaan loogu magacdaray Todoque volcano tube. Xiisaheeda cilmiyaysan ayaa ahmiyad weyn u leh juqraafi ahaan iyo ahmiyaddeeda bayooloji oo sii korodhay sababtuna tahay duunyadeeda khaaska ah ee qalloocan.
Enmedio, oo ah foolkaano biyaha hoostooda mara oo u dhexeeya Tenerife iyo Gran Canaria
Waa mid weyn oo dhexroorkiisu yahay ku dhawaad ​​saddex kiiloomitir, mana jiro wax dhaqdhaqaaq qarxa ah hadda. Meel 500 mitir koonfur -galbeed ka xigta dhismaha weyn ee foolkaanaha Enmedio, waxaa ku yaal laba koon oo sare, oo dhererkoodu uusan ka badnayn 100 mitir badda. Jiritaanka foolkaankan waxaa si sax ah u ogaaday markabka Jarmalka ee Meteor dabayaaqadii 1980 -meeyadii, inkasta oo markii ugu horreysay uu soo sawiray markabka IEO Hespérides dabayaaqadii 1990 -meeyadii. iskugu imanaya meel u dhow gunta hoose ee foolkaanada.
Sidoo kale waa in la ogaadaa in mid kaliya oo ka mid ah labada koon ee dhererkoodu yahay 100 mitir oo ku xiga volcano Enmedio, oo ay kala soocday niyad -jab, la yaqaan. Folkaanaha Enmedio wuxuu u dhow yahay Tenerife marka loo eego Gran Canaria. Gaar ah, Waxay ku taal meel qiyaastii 25 kiiloomitir u jirta laydhka Abona iyo 36 kiiloomitir u jirta dekedda La Aldea de San Nicolás de Tolentino.
Pico Viejo, Jasiiradda Tenerife
Pico viejo (3.100 mitir) waa Folkaano ku taal Tenerife taas oo ay weheliso Mount Teide, Waa labada buurood ee kaliya ee Jasiiradaha Canary oo leh joog ka badan 3.000 oo mitir. Waxay leedahay god 800 mitir dhexroor ah iyo qoto dheer ugu badnaan 225 mitir, waxay mar ahayd haro lava oo cajiib ah. Qarniyadii dhexe (1798), Pico Viejo wuxuu bilaabay inuu ficil sameeyo, isagoo kiciyay mid ka mid ah qaraxyadii taariikhiga ahaa ee Tenerife, oo ka dhacay baarkinka dhexdiisa. Waxay muddo saddex bilood gudahood ah ka cayrisay walxaha Folkaanaha, waxayna samaysay sagaal hawo -mareen, taasoo keentay in maaddadii madoow ay ku daadanto dhammaan qaybta koonfureed ee Caldera de Las Cañadas. Silsiladan taxanaha ah ee godadka si taxaddar leh loo habeeyay waxaa la yiraahdaa Narices del Teide. Waa qayb ka mid ah muuqaalka dabiiciga ah ee Beerta Qaranka Teide waxaana sidoo kale loo yaqaan magaca Montania Cha Hora.
Sidoo kale waa meel dabiici ah oo la ilaaliyo oo iska leh taallada dabiiciga ah oo ay ku jiraan kooxda Teide-Pico Viejo ee foolkaano. Samayskiisu wuxuu ka bilaabmay 200.000 oo sano ka hor badhtamaha jasiiradda. Waa in la ogaadaa in magma waa sahlan tahay in lagu fuulo jasiiradda hadda, iyo sababta oo ah godkan waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah boholaha ugu xiisaha badan Jasiiradaha Canary, sababtuna waa qaababkiisa kala duwan waxay ka dhasheen horumarkiisa.
Los Ajaches waa samays weyn oo foolkaanno ah oo degta qaybta koonfureed ee Jaziiradda. Aaggan muhiimka ah ee dhaxalka qadiimiga ah wuxuu ku yaal magaalada Yaiza, halkaas oo aan ka helno godad, xardho iyo saqafka daaqa qadiimiga ah. Aaggu waa qaybta ugu da'da weyn jasiiradda oo wali si xun u waxyeelaysa nabaad guurka, dooxooyinka uu maro jidkan dabiiciga ah ee soo maray tobankii milyan ee sano ee la soo dhaafay. Los Ajaches waxay ku taal Beerta Qaranka Timanfaya. Qorshaha Los Ajaches wuxuu ku fidsan yahay Punta del Papagayo oo ku taal dhinaca koonfureed ilaa Playa Quemda oo ku taal bartamaha. Waxay yihiin haraaga foolkaano laga soo bilaabo 15 milyan oo sano ka hor. Nabaad-guurka baddu wuxuu baabi'iyey inta badan dhulka dhererkiisu yahay 600-mitir. Qaraxii ugu dambeeyay wuxuu dhacay 3 milyan oo sano ka hor.
Alto de la Guajara, Jasiiradda Tenerife
2.717 mitir oo ka sarraysa heerka badda, waa volcano saddexaad ee ugu sarreeya Jasiiradaha Canary. Waxaa la sameeyay 3 milyan oo sano ka hor. Beerta Qaranka ee Teide waxay kaabis u tahay Beerta Qaranka ee Volcanoes Hawaii; Tan waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in mid kasta oo iyaga ka mid ah uu matalo jasiiradda noocan ah . Marka laga eego muuqaalka dhulka, Beerta Qaranka ee Teide waxay leedahay sifooyin la mid ah Grand Canyon National Park (Arizona, USA).
Magaalada Olot ee Girona, waxaan ka helnay Folkaanaha Santa Margarida. Muuqaal ahaan, wax yar kuma laha tii hore. Arrinta ugu yaabka badan ayaa ah in god ku jiro godka dhexdiisa.
Gobolka La Garrocha waa kan Folkaanaha Strombolian. Gaar ahaan, waxay ku taal Garrotxa Volcanic Belt Natural Park, halkaas oo ay ku yaalliin 40 koon oo foolkaanno ah iyo 20 qulqulaya qulqulaya. Waxaa loo tixgeliyaa kan ugu yar, laakiin wuxuu ahaa mid hurda tan iyo markii ugu dambeysay ee uu qarxay 11.500 sano ka hor.
Waxaan rajaynayaa in xogtan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan volcanoes -ka Spain iyo sifooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Volcanoes ee Spain